अंग्रेजी भाषा छिटो र सजिलो तरिकाले कसरी सिक्न सकिन्छ ? केही टिप्स - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips अंग्रेजी भाषा छिटो र सजिलो तरिकाले कसरी सिक्न सकिन्छ ? केही टिप्स
अंग्रेजी भाषा छिटो र सजिलो तरिकाले कसरी सिक्न सकिन्छ ? केही टिप्स
अंग्रेजी एउटा सामान्य भाषा हो । तर यो आफ्नो मातृभाषा नहुनु र यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हुनुले हामीले यस भाषा सिक्नुलाई दबाबको रुपमा लिन्छौं। तर दबाबमा रहेर तपाईंले केही कुरा पनि सिक्नुहुन्न। त्यसको लागि तपाईंसंग चाहना, उत्सुकता र लगनशिलता हुनुपर्छ। अंग्रेजी सिक्नु असम्भव छैन र त्यसलाई सम्भव बनाउनको लागि यहाँ केही सहयोगी टिप्स राखिएको छ :
सबैभन्दा पहिले त अंग्रेजीलाई सामान्य भाषाको रुपमा लिनुहोस्। यसलाई ‘डर’ र मानिसको ज्ञान अवथा स्तरको मापन गर्ने आधारको रुपमा नलिनुहोस् ।
किताबमा अंग्रेजी व्याकरणका सुत्र घोकेर तपाईंलाई अंग्रेजी आउँदैन । त्यो सिकेको कुरालाई आफूले बोल्दा प्रयोग गर्ने गर्नुहोस्। घरमा वा साथीहरुसंग अंग्रेजी बोल्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुहोस् ।
गल्तीहरुसंग नडराउनुहोस्। बोल्दा वा लेख्दा केही बिग्रिन्छ की भन्ने डरले नबोल्दा भाषा सिकिंदैन । गल्ती भएर केही हुँदैन, त्यसलाई सुधार्दै लग्नुपर्छ। त्यसैले साथी, शिक्षक मात्र होइन, पर्यटकहरु भेट्दा समेत बोल्नुहोस्।
स्मार्टफोन चलाउनुहुन्छ भने, त्यहाँ अंग्रेजी शब्दकोशको एप्लिकेसन हुन्छ, त्यो डाउनलोड गर्नुहोस् वा पकेट शब्दकोश आफूसंग राख्ने गर्नुहोस्।
फेसबुक म्यासेन्जरमा वा अरु माध्यममा साथीहरुसंग वा अरु कोही व्यक्तिसंग ‘च्याट’ गर्दा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नुहोस्। उताबाट म्यासेज पठाएको व्यक्तिले लेखेको कुनै शब्द बुझ्नुभएन भने शब्दकोषमा हेरेर अर्थ पत्ता लगाउनुहोस् र फेरी अंग्रेजीमै जवाफ फर्काउनुहोस्।
अंग्रेजी पत्रिका पढ्नुहोस्। यसरि पढ्दा एउटा शब्दमा नअल्झेर पूरै वाक्य पढ्नुहोस् र पूरै वाक्यको आधारमा आफूले त्यहाँ नजानेको शब्दको अर्थ अनुमान गर्नुहोस्। त्यस्ता शब्दलाई चिन्ह दिनुहोस् वा टिपोट गर्नुहोस् र शब्दकोषमा हेर्नुहोस्। यसरि पढ्दा तपाईंलाई पूरै वाक्य बनाउन र बोल्न थाहा हुँदै जान्छ ।
आफूले सिकेका नयाँ शब्दलाई साथीहरुसंग बोल्दा वा लेख्दा प्रयोग गर्नुहोस्। जसले गर्दा तपाईंलाई ती शब्दहरुको बानी बस्छ।
अंग्रेजीमा लेखिएको किताब दैनिक एक वा दुई पेज पढ्छु भन्ने आफैसंग संकल्प गरेर समय तालिका बनाएर पढ्न थाल्नुहोस्। किताब पढ्दा पनि पहिले पूरै वाक्य पढेर शब्दहरुको अनुमान गर्ने र त्यसपछि मात्र अर्थ हेर्ने गर्नुहोस्।
अंग्रेजी भाषामा दैनिक रुपमा आफ्नो दिनचर्या, आफूमा उब्जिएका भावना वा केही न केही लेख्ने गर्नुहोस्।
अंग्रेजी चलचित्र तथा म्युजिक भिडियो हेर्ने गर्नुहोस्। त्यहाँ बोलिएका शब्दहरु तल सबटाइटलमा लेखिएको हुन्छ, ती हेर्दै सुन्नुहोस। त्यस्तै पहिले आफूले अंग्रेजी गीत सुन्ने अनि त्यो गीतका शब्दहरु मात्र लेखिएको भिडियो पनि भेटिन्छ, त्यो हेर्नुहोस्।
अंग्रेजी बोल्न सिकाउने विभिन्न वेबसाइट तथा किताबहरु हुन्छन, ती हेर्ने गर्नुहोस्।
दिनमा कुनै न कुनै नयाँ शब्द सिक्ने प्रण गर्नुहोस्। कुनै एउटा नयाँ शब्द सुन्नुभयो भने, दुईपटक भन्दा बढी त्यसलाई उच्चारण गर्ने वाक्यमा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस्।
Previous﻿रोजा पार्क्सका जीवनोपयोगी भनाइहरु
Nextटिममा कुशल नेतृत्व कसरी गर्न सकिन्छ ? सहयोगी टिप्स